Ny lalao 29 tsara indrindra ho an'ny finday roa izay ananantsika amin'ny Android | Androidsis
Ny lalao 29 tsara indrindra ho an'ny finday roa amin'ny Android
Lalao ho an'ny finday roa ka rehefa ao an-trano isika dia afaka misintona ilay toerana na mampiasa iray monja aza mba hahafahantsika milalao lalao miaraka amin'ilay mpiara-miasa amintsika na olona iray ao amin'ilay efijery iray ihany.
Fotoana iray isehoan'ireny lalao ireny izao lasa fialamboly tena ilaina amin'ny alàlan'ny fandaniana fotoana be dia be ao an-tranonay. Hanao izany amin'ireo lalao ireo isika izay antenainay fa tsy hamela na iza na iza hiala.
1 Teboka sy boaty - Lalao tetika mahazatra
3 Otera mitambatra
4 Teny miaraka amin'ny namana 2 - Teny miaraka amin'ny namana
5 fifandonana Royale
8 Kintana Brawl
9 Anisan'i Etazonia
15 Fiompiana simulator 18
16 Lalao Gunstar Heroes Classic
18 Ranomasina Battle 2
19 Fanjakana roa fanjakana
20 Mamono angano
21 LOL: Fikororohana ny ala
22 Nanontaniana 2
25 Maty ny Ora
28 Tantaran'i Runeterra
29 Kintana ady hazakazaka
Teboka sy boaty - Lalao tetika mahazatra
Ity lalao ity mamela antsika hilalao lalao eo an-toerana miaraka amin'ny finday iray ihany ka na ny mpiara-miasa aminay aza dia mandao ny azy ary tonga amin'ilay piozila mahaliana sy mahadomelina.
Developer: OutOfTheBit Ltd.
Izahay dia teo aloha lalao izay afaka ankafizintsika indray avy amin'ity takelaka ity ihany mba hiezaka ny hametraka ilay pilina alohan'ny fahavalontsika. Miaraka amin'ny sary feno neon, natsipy ireo lalao mampiala voly sy mahery.
Developer: Natenai Ariyatrakol
Ho afaka hilalao eo an-toerana indray isika, fa amin'ny alàlan'ny a andian-kilalao mini izay mila mailo isika ho an'ireo mekanika vaovao atolotra antsika. Lalao miaraka amin'ny sary sy famolavolana tsara izay miteraka fanandramana multiplayer tsara.
Developer: Fanandramana mihoatra ny7
Teny miaraka amin'ny namana 2 - Teny miaraka amin'ny namana
Zynga dia namoaka laza iray hafa ho an'ny lalao teny iray hafa izay afaka milalao an-tserasera amin'ny namana na olona ao amin'ny fianakaviana isika, na tarehy manohitra ny mpanohitra tsy an-kanavaka avy amin'ny toerana rehetra eto ambonin'ny planeta. Amin'ny endriny tsara, maoderina ary miaraka amin'ny zavatra rehetra takiana amin'ity karazana lalao multiplayer an-tserasera mahazatra ity.
Teny miaraka amin'ny namana 2: teny
Avy amin'i Clash Royale no ahafahantsika milaza ny zava-drehetra, satria iray io amin'ireo lalao 1v1 tsara indrindra tokony hankafizantsika lalao haingana. Azontsika atao ny manana namana hiatrika azy ireo hamaha karatra sy hanoratra ny tokotanin-tsambo tsara indrindra izay horaisinay amin'ireo lalao ireo amin'ny fotoana tena izy.
Mpandady trano-maizina iray manontolo ho an'ireo izay tian'izy ireo ary tokony hampiasa majia, sabatra ary maro hafa. Ny zavatra tsara indrindra amin'ity Soul Knight ity dia izany afaka milalao mpiara-miasa amintsika amin'ny fifandraisana Wi-Fi iray ihany isika, satria hamantatra haingana ny lalao izany mba hidiranao mivantana. Lalao maimaim-poana miandry anao manomboka izao.
Developer: efitra fandroana
Iray amin'ireo lalao tsara indrindra azontsika lalaovina amin'ny finday roaSatria afaka mandany herinandro sy volana maro isika amin'ny fananganana ny tranobenay, fizahana, fanaovana asa-tanana, na fiatrehana sefo farany lehibe. Azo lalaovina amin'ny fifandraisana eo an-toerana eo ambanin'ny WiFi na amin'ny alàlan'ny PC misy mpizara voatokana. Tsy maimaim-poana izany, eny, fa mendrika izany tokoa.
iray hafa amin'ireo lalao Supercell mahomby indrindra ankehitriny ary izany dia ahafahantsika milalao lalao 3V3 miaraka amin'izay atiny rehetra izay matetika ampidirina isaky ny kely dia kely. Lalao haingana sy frenetic izay tsy tokony halainao.
Tsy isalasalana fa iray amin'ireo lalao roa finday tsara indrindra izy io amin'izao fotoana izao ary azo lalaovina eo ambanin'ny fifandraisana eo an-toerana amin'ny WiFi sy an-tserasera. Tsy maintsy manadihady ianao raha hijery hoe iza amin'ireo mpilalao ao amin'ny ekipa no mpanafika ... Mety ho ianao izany.
Iray amin'ireo milalao finday roa be mpitia indrindra noho izy io manohana ny multiplayer eo an-toerana miaraka amin'ny efijery iray izay ahafahanareo roa miditra miditra mankafy ny lalao ataon'izy ireo. Sehatra lehibe misy endrika tsy manam-paharoa izay nandresy ny fon'ny mpilalao maro nandritra ny taona maro.
Mpilalao 8 no hihaona amin'izany lalao tena mipoaka miaraka amina tanjona roa ary ao no tsy misy tsy fisian'ny fahafinaretana. Manolotra fanohanana baiko izy ity ary lalao mahafinaritra be ho an'ireo fipoahana rehetra mitranga araka ny tondroin'ny anarany.
Developer: Eric Fromemling
endri-javatra multiplayer mode amin'ny fitaovana iray ihany noho izany dia lasa iray amin'ireo lalao multiplayer tsara indrindra izy io. Izahay dia tsy hilaza na inona na inona momba ny akoho izay tsy maintsy hiampita arabe ary efa hitantsika tamin'ny tohiny na dia Disney aza izany.
Toy ny hoe io Pong io ihany, lalao iray hafa hilalao amin'ny multiplayer ary izany aza azo lalaovina amin'ny finday hafa amin'ny alàlan'ny fifandraisana Bluetooth. Ity raha ny marina dia mahatonga azy io ho lalao tena manokana izay tsy tokony halainao raha te hilalao ao amin'ny orinasa ianao.
Fa ny tena manaitra ny Escapists 2, noforonin'ny ekipa 17 meloka noho ny Worms mahomby, dia satria Afaka milalao mpiara-miasa 3 hafa amin'ny multiplayer eo an-toerana amin'ny alàlan'ny WiFi isika ary miray tsikombakomba mba hiezaka hivoaka ny fonja izayhidianay. Amin'ity tranga ity dia premium izany.
Fiompiana simulator 18
Naneho hevitra momba ny Farming Simulator 18 izahay fa tena marina izany raha mahita maromaro eo ambanin'ny fifandraisana WiFi iray isika dia afaka milalao amin'ny toeram-pambolena iray isika rehetra mampiasa milina mavesatra na manangona ny vokatra mba hivarotra ny nangonina. Lalao tsy manam-paharoa izay aloantsika amin'ny 4,49 €.
Developer: Rindrambaiko GIANTS
Lalao Gunstar Heroes Classic
Seranana iray manontolo an'ny SEGA Genesis ary inona Io dia mamela antsika multiplayer an-tserasera amin'ny alàlan'ny fifandraisana WiFi ho an'ny finday roa. Ny zava-kanto SEGA pixel rehetra ho an'ny fahafinaretanao faran'izay betsaka, miaraka amin'ny safidy maimaim-poana miaraka amin'ny doka raha tsy mandoa vola ianao hanesorana azy.
Klasika eo amin'ny kilasika ary efa an'ny mpilalao maro mandimby Nanomboka tamin'ny fananganana ny tontolony izy ireo na nandeha tamin'ny fomba mahomby. Iray amin'ireo lalao tsara indrindra ho an'ny multiplayer eo an-toerana na an-tserasera ity raha mandeha any amin'ny Minecraft Realms karama isika. Iray amin'ireo tsara indrindra ary mazava ho azy fa premium.
Ranomasina Battle 2
Izahay dia teo aloha ilay efa nisy hatrizay nisy sambo na nilentika ireo fiaramanidina. Anisan'izany ny maody eo an-toerana hilalaovana ary na i Bluetooth aza hifandray amin'ny mpilalao hafa amin'ny finday hafa ary hankafizanao ny hatsarana nefa tsy mila mandany taratasy na ranomainty. Maimaimpoana amin'ity tranga ity.
Fanjakana roa fanjakana
Lalao goavambe ho an'ny fikarakarana sary miaraka amin'ity zavakanto pixel ity izay tokony hanorenantsika fanjakana kely. Raha ananantsika eto dia satria ny efijery dia azo zaraina ho ambony sy ambany ho an'ny mpilalao tsirairay. Premium io.
Developer: Fahatezerana andavanandro
Amin'ireo fitsapana farany azonay natao ho an'ny Android ary ahoana ny amintsika mitarika lalao 3v3 tena mahery vaika ary iray amin'ireo lalao arcade misy sary sy vokany mahafinaritra. Azonao atao ny milalao an-tserasera amin'ny finday roa ka aza adino ny iray amin'ireo lalao vaovao amin'ny findainao.
LOL: Fikororohana ny ala
Ya ananantsika eto amin'ny firenentsika ny hatsarana MOBA par ary tonga tamin'ny fifanarahana tsara indrindra amin'ny ambaratonga rehetra. Ampio ny mpiara-miasa aminao ary vitiateo ianareo roa amin'ny lalao mifanohitra amin'ireo mpilalao hafa miaraka amina kilasy betsaka sy ny votoatin'ny lalao PC. Tena ilaina; aza adino ny horonantsary nataonay ho an'io fotoana io.
League of Legends: Rifala Biby
Etermax dia nanao anarana ho an'ireo tenany ireo mba hananana an'ity ho iray amin'ireo ohatra tsara indrindra rehefa te hiala voly tsy misy afa-tsy ny fialamboly fotsiny isika. Amin'ny Espaniôla ary ho an'ny mpilalao roa na mihoatra.
Un lalao mitovy amin'ny iray ananantsika ao amin'ny lisitra fa amin'ity indray mitoraka ity amin'ny endrika mitsangana mba hahafahantsika mandroso haingana ary hanana ireo jiro neon ireo izay mamadika ny lalao ho fahitana indray. Nivoaka vao tsy ela akory izay, nefa mandresy ny fon'ny mpilalao maro izy. Maimaimpoana izany ka tsy misy fialan-tsiny.
Tsy hahita lalao mivantana isika, saingy azo antoka fa ho hitantsika ny mpiara-miasa amintsika hiatrika azy amin'ny fizika zavatra sy a poleta mitifitra projectile izay misy fiatraikany amin'ny fizika ao amin'ny vatana. Fahafinaretana lehibe amin'ny fotoana atolotra anao ary hitondra anao amin'ny duel 64-mpilalao.
Maty ny Ora
Vao tsy ela akory izay i Freddy Krueger dia tonga tamina mpilalao marobe marobe an-tserasera izay tokony hialantsika amin'ny nofy ratsy. Ianao dia afaka Milalao ianao tahaka ilay lehilahy ratsy amin'ny sarimihetsika ary manampy ny hafa handositra azy io ny mpiara-miasa aminao. avy amin'io nofy ratsy io. Lalao mahatalanjona amin'ny lafiny rehetra.
Maty tamin'ny Daylight Mobile
Iray amin'ireo mpanafika an-tserasera malaza indrindra ankehitriny koa ary ahafahantsika mankany amin'ireo lalao royale an'ady ireo amina mpilalao am-polony miaraka amin'ny mpiara-miasa aminy. Tena nohavaozina ary miandry ny fahatongavan'ilay kinova vaovao tsy ho ela amin'ny Android.
Tahaka ny PUBG Mobile, miaraka amin'ny Call of Duty dia manana zavatra be atao sy karazana fomba maro isika hankafizana ny iray amin'ireo mpitifitra tsara indrindra ho an'ny finday. Tencent Games eto dia mampiseho hozatra nitondra ny zava-niainan'ny COD rehetra taona maro. Mazava ho azy, fahombiazana.
Ny lalao karatra dia misy kalitao lehibe telo na efatra ary ny iray amin'izy ireo dia ity avy amin'ny Lalao Riot mba hahafahanao milalao amin'ny mpiara-miasa na mpifanandrina tampoka. Ny fahalalana rehetra an'ity fandalinana ity hahitana ny tenany ho tsara indrindra amin'ny sokajy misy azy amin'ny lalao finday roa.
Kintana ady hazakazaka
Y Nahavita ity lisitr'ireo lalao 29 tsara indrindra ho an'ny mobiles roa ity izahay tamin'ny iray tamin'ireo lalao Halfbrick Studios ary tsy misy na inona na inona nitondra antsika ilay Jetpack Joyride vaovao. Amin'ity iray ity dia mila mihazakazaka tsara isika hiatrika mpilalao hafa.
Battle Racing Stars - Lalao fifaninanana
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Lalao Android » Ny lalao 29 tsara indrindra ho an'ny finday roa amin'ny Android
[VIDEO] Ny lalao Android 11 mahafinaritra indrindra navoaka tamin'ny volana martsa lasa teo
Fampiharana 10 hividianana sy hijerena ny loteria Noely